कथा : यात्रा
रुमु न्यौपाने शनिबार, चैत १५, २०७६, १४:००
कति गाह्रो छ एकल महिला भएर जीवन कटाउन। तर, जे जस्तो परे पनि छोडेर जानेहरूसँग पछिपछि लागेर जान पनि नसकिने रहेछ। आफ्नो समय आएपछि सबैले एकदिन यो धर्ति छोडेर जानैपर्ने हुन्छ। सौरभले पनि कलिलै उमेर यो संसार छोडेर गयो। उसले छोडेर गएपछि मैले दुई छोरीहरूलाई कसरी हुर्काइबढाई गरें हुँला? अहिले सम्झिँदा आफैंलाई अत्यास लाग्छ।
सौरभ र मैले प्लस टू सँगै पढ्यौं। सौरभ राम्रो परिवारमा हुर्केको केटा। त्यसो त उसको बानी पनि साह्रै राम्रो थियो। हेर्दा पनि ऊ कलेजका अन्य केटाभन्दा निकै ह्यान्डसम पनि थियो। कलेजका सारा केटीहरू ऊ भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे। मलाई थाहा छैन, उसले त्यतिका राम्री केटी छेडेर किन मलाई नै रोज्यो? प्लस टू सकेकै दिन उसले मलाई प्रेम प्रस्ताव राख्यो। मैले केही सोच्नै सकिनँ। केटी मान्छेको मन न हो, उसले मन पराएको थाहा पाउने बित्तिकै उसको माया लाग्न थाल्यो।
बुबाआमा चाहनुहुन्थ्यो कि मेरो बाँकी पढाइ म नेपाल बाहिरै गरौं। सौरभको पनि ईन्जिनियरिङ पढ्ने ठूलो इच्छा थियो। त्यसैले मैले बुवाआमालाई सौरभको बारेमा भन्नैपर्‍यो। जब मैले सौरभबारेमा बुवा र आमालाई सबैकुरा भनेँ तब बुवाले मेरो अनुहारमा आश्चार्यभावले हेर्नुभयो। सायद बुवालाई विश्वास थिएन, उहाँको छोरीले आफ्नो जीवनसाथी आफैं खोज्छे भन्ने। करिब एकघण्टा जति बुवाआमाको अगाडि बसेर सौरभको गुणगान गाएपछि बल्ल बुवाआमा सौरभलाई भेट्न राजी हुनुभयो।
सौरभ घरमा आयो। बुवाआमाले फेरि करिब आधा घण्टा जति सौरभको अन्तर्वार्ता लिएपछि ऊसँग मेरो विवाह गराइदिन राजी हुनुभयो। त्यसको दुई महिनापछि सौरभ र मेरो सामान्य रुपमा विवाह भयो। विवाह भएपछि सौरभले अस्ट्रलियाको प्रोसेस सुरु गर्‍यो। तीन महिनापछि उसको र मेरो अस्ट्रेलियाको भिसा लाग्यो। म सौरभको डिपेन्डेन्डमा सँगै अस्ट्रेलिया पुगेँ।
समय बित्दै गयो। आजभोलि भन्दा भन्दै अस्ट्रेलिया पुगेको पनि पाँच वर्ष पूरा भयो। सौरभले इन्जिनियरिङको पढाइ सकेर पिआर एप्लाई गर्‍यो। केही समयपछि हाम्रो पिआर भयो। यो खुशीको कुरा हामीले दुवै परिवारलाई सुनायौं। पिआर हुनासाथ हामीलाई दुवै परिवारबाट बच्चा जन्माउने दबाब आउन थाल्यो। सौरभले आफ्नो पढाइ सकेको भएपनि मैले त आफ्नो पढाइ सुरु पनि गरेकी थिइनँ। त्यसैले परिवारको यो कुरालाई मैले स्वीकार्न सकिनँ। मेरो यो निर्णयमा सौरभले पनि साथ दियो।
सौरभ मेरो लागि भगवान् सरह थियो। आँखामा राखे पनि नबिझाउने। मेरो हरेक कुरामा साथ दिन्थ्यो ऊ। उसैको साथ र सहयोगले मैले राम्रो अंक ल्याएर नर्सिङको पढाई पूरा गरें।
नर्सिङको पढाई पूरा गरेपछि हामी परिवारको सपना पूरा गर्नतिर लाग्यौं। मैले जुम्ल्याहा छोरीहरूलाई जन्म दिएँ। सौरभ खुशी भयो। यसैपनि वैवाहिक बन्धनमा बाधिएदेखि मैले कहिले पनि सौरभको आँखामा क्रोध र दुःख देखेकी थिइनँ। छोरीहरू हेर्न सौरभ र मेरो बुवाआमा नेपालबाट अस्ट्रेलिया आउनुभयो। उहाँहरूको स्वागत र सत्कारमा हामीले कुनै कमी छोडेनौं। ६ महिनापछि छोरीहरूको अन्नप्राशन सकाएर बुवाआमाहरू नेपाल फर्किनुभयो। हामीले भारी मन लिएर उहाँहरूको बिदाई गर्‍यौं।
दुईछोरीहरू आरभी र सुरभी ठूला हुँदै गए। उनीहरूको दुईवर्षको जन्मदिन धुमधामको साथमा मनाइदिन मन थियो। शनिबार परेकोले सौरभको पनि काम थिएन। सौरभ पनि उत्सुक देखियो, छोरीहरूको जन्मदिन मनाउन। छोरीहरूको जन्मदिन धुमधामसँग मनाइसकेर सबै अतिथिलाई बिदा गरेँ।
कोठामा पुग्दा सौरभ छट्पटिरहेको थियो। मैले आत्तिदै सोधें, “सौरभ के भो तिमीलाई? सौरभ छातीको दुखाईको पिडामा छट्पटिरहेको थियो। मैले के गर्ने कसो गर्ने सोच्न सकिनँ। धन्न हामीसँग बस्ने चिनेको नेपाली दिदी र भिनाजु थिए र अलिकति साहस आयो। दिदीलाई दुई सानी छोरीहरूको जिम्मा लगाएर भिनाजु र म सौरभलाई अस्पताल लिएर गयौं।
केहीबेर सबै परीक्षण गरिसकेपछि मलाई डक्टरले बोलाएर भने, “आइ एम सरी। हि इज् सफरिङ फ्रम लङ्ग्स क्यान्सर। हि ह्याभ ओन्ली फ्यू मन्थ्स् टु लिभ।”
मुख सुक्यो, पसिना आयो, हातखुट्टा सबै गल्यो तर बोली फुटेन। सौरभ असाध्यै चुरोट पिउँथ्यो। म कति सम्झाउँथे तर ऊ मान्थेन। आज त्यसकै नतिजा ऊ मृत्युको नजिक पुग्दैछ।
केही गर्दा पनि सौरभलाई बचाउन असम्भव भएपछि म दुईछोरी र सौरभको साथमा केही समयको लागि नेपाल फर्किएँ। सौरभ पनि चाहन्थ्यो कि उसको बाँकी जीवन नेपालमै बितोस्। करिब ६ महिना मृत्यूसँग लडेपछि सौरभले हार्‍यो अनि मृत्यूले जित्यो। के सोचेकी थिएँ, के भयो जिन्दगीमा। सौरभको मृत्यूपछि मलाई नेपाल बस्न झन् सकस भयो। सौरभ र मेरो परिवारले लाखौंपटक सम्झाउनु भयो नेपालमै बस्नलाई। तर नेपाल बसेर मलाई सौरभको याद मेटाउन झनै मुस्किल पर्‍यो।
यो जीवन यात्रा नै त रहेछ। कहिले कता कहिले कता पुग्ने यात्रा। म त्यही गन्तव्यविनाको यात्री थिएँ। त्यसपछि फेरि छोरीहरू लिएर म अस्ट्रेलिया आईपुगें। छोटो अवधिमा जीवनले दिएको यो लामो चोटहरू म कसरी बिर्सन सक्छु र?
“मम्मा ह्वेर आर यू,” आरभीले बोलाएपछि पो म झस्किएँ।
“मम्मा आर यू क्राईङ?” जति लुकाउन खोजे पनि बाह्र वर्षकी सानी छोरीले मेरो आँशु देखिहाली।
छोरीहरूले त आफ्नो बुबा चन्न पनि पाएनन्। “ह्वेर इज पापा” भन्दै घरीघरी सोध्छन्। म “हि इज विथ गड” भनेर जवाफ दिन्छु।
खै कति बुझछन्, कति बुझ्दैनन् थाहा छैन। तर बुझेझैं गरेर चुप लाग्छन्।
छोरीसँग बसेर कुरा गर्दागर्दै फोनको घण्टी बज्यो। आशिषले गरेको रहेछ। आशिष, मैले काम गर्ने हस्पिटलको डाक्टर अनि मेरो मिल्ने साथी पनि। हामीबिच सबैकुरा सेयर हुन्छ। आशिषको डिभोर्स भएको कुरा मलाई भेट भएको एक हप्तामै सुनाएको थियो। जति मिले पनि म उसँग एउटा दूरी कायम गर्थें। म चाहन्न थिएँ कि सौरभलाई बिर्सेर म कसैसँग जीवन बिताउँ। बाँकी जीवन बिताउन मसँग सौरभको याद र दुईछोरीहरूको साथ नै काफी थियो।
आशिष मलाई कहिले सँंगै लन्च गर्न त कहिले सँगै डिनर गर्न प्रस्ताव राखिरहन्थ्यो। मलाई थाहा छैन, सबैकुरा थाहा पाएर पनि ऊ किन त्यसरी मेरो पछि लागिरहेको छ? मेरो मनमा ऊप्रति केही नभएपनि अस्पतालमा कार्यरत सबै नेपालीहरूले हाम्रो कुरा गर्न थालिसकेका थिए। मेरो र आशिषको अगाडि कसैले केही भन्ने आँट नगरे पनि हल्लाको दुर्गन्ध लिसकेको थियो। विदेश भएपनि हल्ला फैलाउन नेपालीहरूलाई रोकेन।
म आफ्नो सिफ्ट सकेर घर फर्कँदै थिएँ। आशिषले बोलायो। म चाहन्थेँ कि अब उसको र मेरो बारेमा चलेको हल्लाले हस्पिटल नतताओस्। तर ऊ एकोहोरो मलाई बोलाईरहेको थियो। म अडिन बाध्य भएँ।
“आई लभ यू स्वस्तिका,” पछाडि हातमा भएको गुलाफ मलाई दिँदै उसले भन्यो।
मलाई जुन कुराको डर थियो त्यही भयो। ऊ भन्दै थियो, “तिमी यदि मलाई मन पराउँछौं भने म तिम्रो घर अगाडिको एसफिल्ड पार्कमा वेट गरिरहने छु ठिक पाँच बजे आऊ, आइनौं भने सम्झनेछु कि मेरो लागि तिम्रो मनमा केही फिलिङ्स रहेनछ।”
त्यति भनेर उ सरासर हिँड्यो।
मेरो मनमा कुरा खेलिरह्यो। यतिका वर्षसम्म उसँग एउटै हस्पिटलमा काम गरेपछि मलाई पनि उप्रति फिलिङस् नआएको पटक्कै हैन तर मैले विवाह गरें भने मेरो दुई छोरीको के हुन्छ ? अठार वर्ष नपुगुन्जेल त उनीहरू मेरो जिम्मेवारी हुन्।
मैले सोचें, “म आशिषसँग कुरा गर्छु, यदि उसले मलाई अपनाउन चाहन्छ भने उसले आरभी र सुरभीलाई पनि अपनाउनु पर्छ। के उसले अपनाउला मेरी छोरीहरूलाई?”
म यस्तै सोच्दै उसले भनेको समयमा एसफिल्ड पार्क पुगें। ऊ त मभन्दा पहिला पार्कको चेयरमा बसेर मेरो प्रतीक्षा गरिरहेको रहेछ। मैले मनभित्र चलेका सबैकुरा उसलाई भनें। उसले हाँस्दै भन्यो “मैले तिमीलाई मन पराएको छु स्वस्तिका, यसको मतलव यो हो कि तिमीसँग जोडिएका सबै कुरालाई म माया गर्छु। ”
जीवनको यात्रामा कसले कतिखेर छोडेर जान्छ र को कतिखेर साथ दिन आइपुग्छ भन्ने कुरा पनि थाहै नहुने।
सौरभले यो यात्रालाई अधुरो छोडेर बीच बाटोमै बिलिन भएको थियो। आशिष त्यो यात्रालाई पूरा गर्न मेरो साथ आइपुगेको छ।
मैले मेरो जीवनको बाँकी यात्रा उसैससँग तय गरिदिएँ।
मेरा बा र जेष्ठ १५ [कविता] आज जेष्ठ १५ गते मेरो, अह! हाम्रो, अह ! खैर नेपाल सरकरले मेरो चाइनिज मोबाइलमा एउटा सन्देश पठाएको छ गणतन्त्र दिवशको उपलक्ष्यमा शु... बिहीबार, जेठ १५, २०७७
कविता : खै के गर्ने? अगाडि बाटो, पछाडी साथी अगीडिबढुँ साथी छुट्ने पछाडी सरूँ, बाटो छुट्ने खै के गर्ने? आइतबार, जेठ ११, २०७७
कविता : म नारी पढाइलेखाई गरेँ अनेक सपना साकार पार्दैछ हरेक जिम्मेवारीको बोक्दै भारी अगाडि बढिरहेछु, म नारी आइतबार, जेठ ४, २०७७
महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुलका लागि ८८ करोड रुपैयाँ बिहीबार, जेठ १५, २०७७
काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्गका लागि ८ अर्ब ९३ करोड बिहीबार, जेठ १५, २०७७
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ३० करोड बिहीबार, जेठ १५, २०७७
वित्तीय क्षेत्रको नियमन खुकुलो पारिने, सहुलियतपूर्ण कर्जाको बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान बिहीबार, जेठ १५, २०७७
'हरेक प्रदेशमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग' बिहीबार, जेठ १५, २०७७